Ny faharetan'ny ora iasana sy ny fakana aina. - FIRAISAN'NY SENDIKAN'NY MPIASA ETO MADAGASIKARA
Ny faharetan’ny ora iasana sy ny fakana aina.
Toa izao ny
1 – Momba ny faharetan’ny asa :
Ny atao hoe faharetan’ny asa dia ny Fe-potoana tena iasana : tsy tafiditra ny fotoana lany amin’ny fisoloana akanjo sy ny fisakafoana
a) Ny faharetan’ny ora iasana ara-dalàna isam-bolana dia tsy mahazo mihoatra ny telo amby fitopolo amby zato faingo telo amby telopolo (173,33) ora.
b) Ireo voakasika amin’izany :
Ny toerana rehetra fehezin’ny lalàna momba ny asa, ka miasa mandritra ny fotoana voafetra na am-paritra na an-tsingany, na lahy na vavy, na firy taona na firy taona.
Ny trano fampianarana.
Ny trano fanaovana asa soa.
Ny mpiasa birao.
Ny mpanao asa tanàna.
d) Any amin’ny orinasa misahana fambolena dia ferana ho roanjato sy roa arivo (2 200) ora isan-taona ny ora fiasana ara-dalàna.
Didim-panjakana no mametra ny faharetan’ny asa ary koa ny fitsipika momba ny ora iasana ambony ampanga sy ny fombafomba fandoavana ny karama amin’izany.
e) Ambony ampanga ny ora iasana ankoatra ny faharetan’ny asa ara-dalàna ka ahazoana tataon-karama.
Didim-panjakana raisina rehefa avy nakana ny Filankevi-Pirenena momba ny Asa no mamaritra isaky ny sampan’asa sy sokajy amin’ny asa ny fombafomba fampiharana ny faharetan’ny asa sy ny fahafahana mandingana azy, ny antony sy ny faharetan’ny ora ambony ampanga azo atao, ilàna fahazoan-dalana mialoha na tsia, ny sandan’ny tataon-karaman’ny ora ambony ampanga.
Tsy misakana ny fanao sy ny fifanarahana iombonana eo amin’ny asa izay mety hametraka fetra ambany kokoa ny fampiharana izay voalaza etsy aloha.
Ny atao hoe fampitoviana lenta (na équivalence) dia :
Ny faharetana ny fotoana ijanonana ao amin’ny toeram-piasana izay heverina hifandray amina fe-potoana tena iasana, ho an’ny karazan’asa sasany, sy ho an’ireo asa mitsitapitapy.
Fampiharana ny fampitoviana lenta :
Ny ora ambony ampanga,
Ny oran’ny asa alina,
Ny asa alahady ary ny andro tsy fiasana.
Didim-panjakana nakana ny hevitry ny Filankevi-Pirenena momba ny Asa no mamaritra ireo karazan’asa sy ny fampitoviana lenta mifandraika aminy isaky ny sampan’asa
Ny atao hoe faharetan’ny asa :
Ny fe-potoana tena iasana.
Ny fotoana ilaina amin’ny fisoloana akanjo sy ny fisakafoanana.
Ny fotoana ilaina amin’ny fiatoana vetivety dia faritana amin’ny alalan’ny fifampiraharahana eo amin’ny roa tonta.
2 – Momba ny fakana aina isan-kerinandro sy ny andro tsy fiasana :
24 ora isan-kerinandro farafahakeliny, ary andraisana karama.
Isan’alahady no fakàna azy amin’ny ankapobeny.
Didim-panjakana raisina rehefa nilàna ny hevitry ny Filankevi-Pirenena momba ny asa no mametra ny fombafomba fampiharana izay voalaza etsy ambony, indrindra ho an’ny asa sasany hahafahana, noho ny antony manokana sy mazava tsara, manome fakana aina na mihoatra ny 24 ora, na mampifandimby ny fakan’ny mpiasa aina, na mandefa ny mpiasa hiara haka aina amina andro hafa ankoatry ny alahady, na mampihantona ny fakana aina isan-kerinandro ho onitry ny andro lany tamina lanonan-drazana, na koa mitsinjara ny fakana aina anatin’ny fe-potoana mihoatra ny herinandro.
3 – Momba ny andro voalaza fa tsy iasana nefa andraisan-karama :
Didim-panjakana raisina rehefa nakana ny hevitry ny Filankevi-Pirenena momba ny Asa no mametra ny fombafomba fampiharana ireo voalaza etsy ambony.
Ny lisitr’ireo “anelanelany” mandritra ny taona iray sy ny andro tsy fiasana dia avoaka amin’ny fiandohan’ny taona amin’ny alalan’ny Didim-panjakana raisina rehefa nakana ny hevitry ny Filankevi-Pirenena momba ny Asa.
Didim-panjakana raisina rehefa nakana ny hevitry ny Filankevi-Pirenena momba ny Asa no mametra ny sandan’ny tataon-karama amin’ny asa alahady sy ny andro tsy fiasana isaky ny sampan’asa sy sokajy amin’ny asa.
4 – Momba ny asa alina :
Ny asa atao anelanelan’ny amin’ny folo (10) ora alina ka hatramin’ny dimy (5) ora maraina no atao hoe asa alina.
Ny ora iasana ao anatin’izany dia ahazoana tataon-karama.
Didim-panjakana raisina rehefa nakana ny hevitry ny Filankevi-Pirenena momba ny Asa no mamaritra ny sandan’ny tataon-karama.
Tsy maintsy iantohan’ny mpampiasa ny fitaterana sy fiarovana ireo mpiasa miasa amin’ny alina.
Didim-panjakana raisina rehefa nakana ny hevitry ny Filankevi-Pirenena momba ny Asa no mamaritra ny fomba fampiharana
Momba ny asa alina ataon’ny vehivavy any amin’ny indostria:
Tsy azo atao ny mampiasa vehivavy amin’ny alina :
Na firy taona na firy taona,
Any amin’ny toeram-piasana indostrialy na inona karazany, na miankina na tsy miankina amin’ny fanjakana, na antokom-pinoana, na fampianarana asa, na fanaovan-tsoa. Azo atao kosa ny mampiasa olona any amin’ireo toeram-piasana tsy mampiasa afa-tsy mpiasa avy amin’ny fianakaviana iray.
Ireto avy ireo toeram-piasana indostrialy :
(a) Ny toeram-pandraharahana harena an-kibon’ny tany, toeram-pitrandraham-bato, ny indostria mitrandraka karazan-javatra maro;
(b) Ny indostria mpanodina taozavatra, mpanova, mpanadio, mpanarina, mpanaingo, mpamita, mpanomana mba hamidy na mamadika ny akora toy ny fanamboarana sambo, ny indostria mpamotika fitaovana ary koa ny famokarana, fanovàna ary fampitana hery mpanetsika amin’ny ankapobeny sy herin’aratra;
(d) Ny fananganana, famerenana, manangana, fikojakojana sy fanarenana, fanovàna na famotehana rehefa mety ho trano na tsangan-javatra, lalamby, lalamby an-tanan-dehibe, seranana, toeram-pampitodian’entana, làlam-piondranana, lakan-drano, fitaovana apetraka ho an’ny fitateran-tsambo anatiny, làlana, tonelina, tetezana, tetezan-dava, lavaka fanangonan-drano maloto, tatatra famoahan-drano maloto, lava-drano, fametrahana fitaovam-pifandraisan-davitra, fametrahana fitaovana mamokatra sy mampita herin’aratra, ozinina mamokatra gazy, fitsinjarana rano na asa fanorenana, sy izay mety ho asa fanomanana sy asa fototra mialoha ireo asa voatanisa ireo;
Ireo fandraràna voalaza teo ambony ireo dia tsy hampiharina :
a. Amin’ny antony tsy azo anoharana, raha misy fahatapahan’ny fitrandrahana mitranga eo amin’ny toeram-piasana ka tsy azo novinavinaina mialoha sady tsy mpiseho matetika;
b. Amin’ny asa atao amin’ny akora iainga, na amin’ny akora efa eo ampamolavolana, izay mety ho simba haingana, raha toa ka ilaina mba ho famonjena izany akora izany amin’ny fahasimbana tsy azo ihodivirana ny fiasàn’ny vehivavy amin’ny alina.
Tsy azo ampiasaina amin’ny alina ny vehivavy bevohoka izay voamarin’ny mpitsabo mandra-pahatapitry ny valo herinandro aorian’ny nahaterahany.
Momba ny fakana aina ho an’ny vehivavy sy ny ankizy :
12 ora mitohy ny fialan-tsasatra isan’andro ho an’ny vehivavy sy ny ankizy.